၁၈ ၁၁ ၂၀၁၃ တနင်္လာနေ့ညနေဘက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် Arakanese young girl aged( 6) was raped and brutally murdered by Bengali muslims at Kra Nyo Pyin village | democracy for burma
tags: Arakanese young girl, BENGALI MUSLIMS, brutally murdered, Burma, Kra Nyo Pyin village, Myanmar, RAKHINES STATE, raped
Mi Mi Nge,
15-11-2013 A high-level delegation from the Organization of Islamic Cooperation (OIC) was greeted by an estimated 3,000 protestors Friday, when the group that includes foreign ministers from Islamic countries arrived in western Burma’s troubled Arakan State.
18-11-2013 An Arakanese young girl aged( 6) was rapped and brutally murdered by Bengali muslims at Kra Nyo Pyin village of Kyauk Taw township in Arakan State,Western Burma..
17-11-2013 An Arakanese young girl aged( 5) was brutally murdered
and keep underground . Peolpe found 18-11-2013 10:00 morning at Paut Taw – west phayoungka iland Soe Mea Kyi village .Bengali Muslims physically tortoured and gang-raped an arkanese minor girl at Rakhine State, western Myanmar.A six-year-old girl, namely Mi Mi Nge, daughter of U Shwe Aung and Daw Moe Moe San living in Kyar Nyo Village in Kyawtaw Township, was abducted by Bengali Muslims from Ywar Hnyar Village on Monday evening.When dawn broke, her body was found dumped at paddy field outside the village.She was found to be wounded on the head and injured on both cheeks.It is reported that one of suspects has been arrested and is interrogating.The dead body is under medico-legal examination at Apaukwa hospitalThe local Arakanese Buddhists suspect that it wasahandiwork of the miscreants belonged to Wranyar Muslim village located nearby the Kyar Pru Byint village. Of course, the police have not confirmed it and continued their investigations.
ကိုယ်ချင်းစာစိတ် စာနာစိတ် ရှိသူတိုင်း Share ပေးကြပါ ။
နွားလိုတရိ စ္ဆာန်ဘင်္ဂလီကုလားတွေကြောင့် လူမမယ်ရခိုင်သူလေး သေရပြန်ပြီ
၁၈ .၁၁ . ၂၀၁၃ နေ့ညက ကျောက်တော်မြို့နယ် ကြာညိုပြင်မှ ၆ နှစ်အရွယ် ရခိုင်သူလေးတစ်ဦးကို ရွာညှာရွာမှ ဘင်္ဂလီကုလားများက မုဒိန်းကျင့်သတ်ဖြတ်ပြီး လယ်ကွင်းထဲပစ်ထားခဲ့ကြသည် ။
ပေါက်တောမြို့နယ် စိုးမဲကျီကျေးရွာတွင်လည်း ၅ နှစ်အရွယ် ရခိုင်မိန်းကလေးတစ်ဦး အလားတူ အသတ်ခံရဟု ကြားသိရသည် ။
ကျောက်တော်မြို့နယ် ရွာညှာဆိုသော ကုလားရွာသည် ရခိုင်ရွာများကြားတွင်ညှပ်ပြီးတည်ရှိနေသော ရွာဖြစ်သည် ။
ရခိုင်တို့က ထိုကုလားရွာကို မည်သည့်အနှောင့်အယှက်မျှ မပြုလုပ်ခဲ့ကြပေ ။
ရခိုင်တို့သာ အကြမ်းဖက်လိုစိတ်ရှိလျင် ထိုရွာညှာကုလားရွာ မီးဟုန်းဟုန်းထလောက်ပြီ။
ပြည်ထောင်စု / ပြည်နယ် အစိုးရ ၊ UN နှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများက ကုလားတို့အား လိုလေသေးမရှိ ကျွေးမွေးထောက်ပံ့ထားကြသည် ။ ကုလားများအတွက်ဆိုလျင် အိမ်သာကအစ ပူပန်ပေးကြသည် ။ ကုလားငယ်များစာလာသင်ပါမည့်အရေး ဆန် တောင်ထုတ်ပေးရသည် ။
ဆီ ကို ရေချိူး ဆန်အိတ် တောင်လိုပုံ ဘ၀မျိူး ဖန်တီးပေးထားကြသည် ။
# ဆွဲ တင် စစ် ၀န်ထမ်းများ အကြမ်းဖက်ခံရခြင်း
# စစ်တွေ အုန်းတောကြီးရဲကင်းမီးရှို့ခံရပြီး ၊ ရဲဝန်ထမ်းမျာ ကုလားတို့၏ ၀ိုင်းဝန်းခြိမ်းခြောက်ခံရခြင်း
# ကျောက်တော်မြို့နယ် ရွာတစ်ရွာမှ ရွာဆရာမ နှင့် တပည်ုမိန်းကလေးငယ်တို့ အသေသတ်ရန် ကြံစည်ခံရခြင်း
# ပေါက်တော ဆင်တက်မော်အုပ်စု ဆင်အိုင်ရွာမှ ရခိုင်အမျိုးသမီး တစ်ဦးအသတ်ခံရပြီး ၊ တစ်ဦးပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရလောက်အောင်ထိ အာကြမ်းဖက်ခံရခြင်း
စသည်… စသည်… စသည်ဖြင့် ရခိုင်တို့ ကုလားများထံတွင် အကြမ်းဖက်ခံရပေါင်းများလှပြီ ။
အစိုးရမင်းများ နှင့် တစ်ချို့ရခိုင်ပညာရှင်ဆိုသူများက ပညာမတတ်လို့၊ ဆင်းရဲလို့ ပဋိပက္ခဖြစ်ရသည် ။ ထိုကြောင့်ကုလားများကို ပညာတတ်အောင်သင်ပါ ၊
ထိုပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဆွေမျိုးသားချင်းထဲက တစ်ယောက်ယောက်သည် အောက်ပါဓါတ်ပုံက ဖေါ်ပြသည့်
ကျောက်တော် ကြာညိုပြင်ရွာသူ ၆ နှစ်အရွယ် မမိုးမိုး လိုအဖြစ်မျိုးနှင့်ကြုံရပါလျင် မည်သို့ခံစားကြရမည်နည်း ။ ရွှေပြည်အေးတရားပြောနိုင်ကြပါဦးမည်လား ။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရခိုင်လူမျိုးဝန်ကြီးများ ၊ အမတ်မင်းများ ရခိုင်လူမျိူးတို့၏ မလုံမခြုံဘ၀များကို တိုက်ကြီးပေါ်မှာနေရင်း ကားအမဲရောင်ကြီးစီးရင်း တစ်ချက်လောက်ပြန်လှည့်ငဲ့ကြည့်ကြပါအုန်း ။
*** ကုလား အိမ်သာတက်ရမည့်အရေးကိုချည်း မပူပန်ကြဘဲ ရခိုင်တို့၏ လုံခြုံရေးကိုလည်း စေတနာအရဘဲဖြစ်ဖြစ် တာဝန်အရဘဲဖြစ်ဖြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးကြပါလို့ မရဲတရဲ တိုက်တွန်းပါရစေ ။
### မလွှဲသာ မကင်းသာ နောက်တစ်ချီ လာကြရတော့မှာလား ….
၁၈ ၁၁ ၂၀၁၃ တနင်္လာနေ့ညနေဘက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ် ကြာညိုပြင်ကျေးရွာမှ ဦးရွှေအောင်ဒေါ်မိုးမိုးစံတို့၏သမီး အသက်၆နှစ်ရှိ မိမိငယ်အား ရွာညှာဘင်္ဂါလီရွာမှ ဘင်္ဂါလီများရှောင်တခင် ခိုးဝင်လာပြီး ဖမ်းဆီသွားပြီး မနက်မိုးလင်းသောအခါ ရွာပြင်စပါးခင်းတွင် အလောင်းအားပစ်ချထားခဲ့သည်
အလောင်းတွင် ဦးခေါင်းဒဏ်ရာတစ်ချက် ပါးတစ်ဘက်တစ်ချက်စီနှင့် မုဒိန်းကျင့် ခံထားရသည်တို့က်ိုတွေ့ရှိရသည်
သက်ဆိုင်ရာမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကြောင့် တရားခံတစ်ဦးဖမ်းဆီးထားသည်ဟုသိရှိရသည် အလောင်ကို အပေါက်ဝတိုက်နယ် ဆေးရုံတွင် စစ်ဆေးလျှက်ရှိသည်
Credit: ဦးညာဏ စစ်တွေ
ပေါက်တောမြို့နယ်၊အနောက်ဖရုံကာကျွန်း၊ စိုးမဲကျီကျေးရွာမှအသက်(၅)နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးသည်နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်၊
လိုက်လံရှာဖွေမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြရာ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့လည် ၁၀ နာရီခွဲခန့်တွင်သတ်ဖြတ်မြေမြုပ်ခြင်းခံထားရသည်ကို
and keep underground . Peolpe found 18-11-2013 10:00 morning at Paut Taw – west phayoungka iland Soe Mea Kyi village .
← EU, Myanmar agree to cooperate in business, tourism and mining
MYANMAR: mass exodus from refugee camp →